HTC iyo Motorola ayaa sheegay in aysan ka gaabin taleefannadooda duugga ah | Androidsis
Eder Ferreño | | Batariga, HTC, Motorola
Apple ayaa si toos ah isha loogu hayaa ka dib markii la muujiyey in shirkadda Mareykanka ka dib markii taas la muujiyey waxqabadka iPhone lagu daray Kuwii waaweynaa ayaa hoos u dhacay markii nolosha batarigu yaraatay. Shirkadda Cupertino waxay ahayd inay ka baxdo oo ay tidhaahdo tani waxay ahayd qiyaas u adeegaysay ilaalinta qaybaha intiisa kale.
Laakiin, go’aankan Apple waa mid muran badan dhaliyay, sidaa darteed waxaa jira isticmaaleyaal xitaa kor u qaadaya inay dacweeyaan shirkadda. Xaaladdan ayaa sababtay dad badan ayaa isweydiiya haddii isla waxku dhacaan aaladaha Android. Sidaa darteed, laga bilaabo qarka u saaran waxay la xiriireen dhowr magac si ay wax uga weydiiyaan. Hal HTC iyo Motorola ayaa ka jawaabey.
Inta badan calaamadaha suuqa kama aysan jawaabin su'aalaha Verge. Iyadoo HTC iyo Motorola waxay rabeen inay baxaan ka hor intaan xanta bilaabmin inay ku dhex wareegto internetka. Labada magacba waxay ka faalloodeen in taleefoonadooda midkoodna uusan gaabin marka batteriga uu bilaabo inuu lumiyo awoodda.
HTC ayaa faallo ka bixisay in aysan fulinin dhaqanka noocan ah. Intaas ka dib Motorola waxay faallo ka bixineysaa inaysan jirin hoos u dhac ku yimaada qalabkooda. Labada shirkadoodba kalsooni ayey ku qabaan sheegashooyinkaas. Marka wax waliba waxay muujinayaan inay run sheegayaan.
Waqtigan xaadirka ah shirkadaha kale ma aysan rabin ama awoodin inay ka falceliyaan. In kasta oo la ogaa taas Samsung iyo Sony ayaa darsaya xaaladda. Marka waa suurtagal in ay daabacaan xoogaa fal celin ah oo kusaabsan arintaas. Laakiin, ciidaha Kirismaska ​​waxay keeneen in arrinta xoogaa dib loo dhigo.
Dhanka kale, noocyada kale sida Google ama LG iyana jawaab kama bixin, mana aysan soo bandhigin wax tilmaam ah inay sida ugu dhaqsaha badan sameyn doonaan. Waxaan rajeyneynaa inay jiraan noocyo intaas ka badan ku biir HTC iyo Motorola oo soo bandhig hadalo. Xaqiiqdii waa inaan sugnaa ilaa bisha Janaayo tan oo dhaceysa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » HTC iyo Motorola ma yareeyaan waxqabadka mobilada leh baytariyo duug ah
18-ka casriga ah ee yeelan doona Snapdragon 845 sanadka 2018